Tag: ngoro yekutengera kusiiwa | Martech Zone
Tag: ngoro yekutengera kusiiwa
Maitiro Ekudzora uye Kudzosera Akasiiwa Akatengera Ngoro
China, Kurume 1, 2018 Svondo, Kurume 4, 2018 Douglas Karr
Munguva yakapfuura, ndakagovana zvakati wandei zvinyorwa - zvinosanganisira kugadzira rakaringana ecommerce Checkout peji - kudzivirira kusiiwa kwakatengwa ngoro, asi ini ndinoramba ndichishanda nevatengi vane dambudziko mukugadzirisa yavo ecommerce mushandisi ruzivo uye Checkout ruzivo. Ndeapi Avhareji yekutengera Kurambidza Mitengo? Desktop - Avhareji Yekusiyiwa Mitengo iri 67.1% Hwendefa - Avhareji Yekusiya Mitengo iri 70% Nhare - Avhareji Yekusiya Mitengo iri 77.8% Yako saiti haife yakazowana
Mhedzisiro yekuchengetedzeka Kwekubhadhara Solutions paKutenga Pamhepo
Svondo, Zvita 18, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kana zvasvika pakutenga pamhepo, maitiro eashopper anonyatsodzika kune zvimwe zvinhu zvakakosha: Chido - kungave kana kwete iye mushandisi anoda kana kuda icho chinhu chiri kutengeswa online. Mutengo - kungave kana kwete kuti chinhu chechinhu chinokurirwa nechishuwo icho. Chigadzirwa - chingave kana kwete chigadzirwa chakashambadzwa, pamwe nekuwongororwazve kunobatsira muchisarudzo. Vimba - kungave kana kwete mutengesi wauri kutenga kubva kwaanogona